EX - ABSDF: စစ်တပ်နဲ့ နိုင်ငံရေး (၁၂)
ဆိုဗီယက်ကတင့်ကား တပ်မကြီးခြေ လာပြီးဝင်သိမ်းလာမဲ့အန္တရယ်ကိုရင်ဆိုင်ဖို့ 4th Armored Division တင့်ကားတပ်မကို စစ်အေးကာလ ကစပြီးခုထိ ဥရောပမှာထားတယ်။ တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာ စစ်တိုက်ဖို့အတွက်ကြတော့10th Mountain Division ကိုနယူးယောက်မှာထားတယ်။
နယ်မြေသိမ်းပြီးပြီဆိုရင် နယ်မြေထိမ်းဖို့အတွက်ကြတော့ နယ်ထိန်းတပ်(Garrison Battalions) လိုလာ တယ်။အမေရိကန်လို အင်အားကြီးနိုင်ငံမှာ ကြည်းတပ်၊လေတပ်၊ ရေ တပ်၊ကမ်းခြေတက်တပ် (Marines) ဆိုပြီးဖွဲ့ထားတယ်။ မရိန်းက အုပ်ချုပ်မှုသပ်သပ်နဲ့ သီးခြားရပ်တည်ပေ မဲ့ ရေတပ်ကသင်္ဘောတွေနဲ့ တွဲတိုက် ရတာမို့ရေတပ်နဲ့ တွဲထားတယ်။မရိန်းရဲ့ ဦးရေကနဲတာကြောင့် သူ့ကို တော့Corps အဆင့်မှာပဲထားတယ်။
အမေရိကားမှာ ကြည်းတပ်၊လေတပ်၊ရေတပ် တွေကို အာဏါမသိမ်းနိုင်အောင် သီးခြားရပ်တည် နိုင်အောင် ဖွဲ့စည်းပေးထားတယ်။သီခြားစစ်တက္ကသိုလ်၊ သီးခြားအမိန့်ပေးစနစ် (Command Structure) ရှိတယ်။အရပ်သားထိန်းချုပ်မှုရှိအောင် အမေရိကန်သမ္မတဟာ တပ်မတော်သေနာမတိဖြစ်တယ်။ ဒါနိုင်ငံ(စ) တည်ထောင်ကတည်း ကပါလာတာ။ ပြီးမှကြည်းတပ်၊ရေတပ်၊လေတပ်၊မရိန်း တွေကို(တွဲဖက်စစ်ဦး စီးချုပ်)(Joint Chief of Staff) ဆိုပြီး တပ်ပေါင်းစုကို အလှည့်ကျ အုပ်ချုပ်ဖို့ သမ္မတကရွေးချယ်ရပြီး ဆီး နိတ်ကအတည်ပြုပေးရတယ်။ (၄)နှစ်သက်တမ်း (၂)ခါနဲ့ပို အမှုမထမ်းဆောင်နိုင်ဖူး။ ရေတပ်မှာလည်းလေတပ် ရှိသလိုကြည်းတပ်မှာလည်း အထောက်အကူပြုလေတပ်ရှိတယ်။ Warhog (A7) ဆိုတာတင့်ကားပစ်တာ ထိရောက်လွန်းလို့ ခုထိ မပြောင်းသေးဖူး။ ဟယ်လီကော်မတာတပ်ဖွဲ့(Attack Helicopters)တွေဟာကြည်းတပ်အောက် မှာပဲရှိတယ်။ မရိန်းတပ်တွေမှာလည်းကမ်းခြေတိုက်ပွဲ အတွက်အကူလေတပ် အငယ်စားရှိ တယ်။ ကြည်းတပ် ၊ရေတပ်၊လေတပ်သီးခြားစစ်တက္ကသိုလ် တွေရှိတယ်။မရိန်းကရေတပ်စစ် တက္ကသိုလ်အတူတူတက်ပြီးမှ ခွဲထွက်သွားတယ်။
အမေရိကားမှာ regular (အမြဲတန်းတပ်)ဆိုတာရှိတယ်။ နောက်National Guard ဆိုတာရှိတယ်။ ပြီးမှReserve (အရံတပ်) ဆိုတာရှိတယ်။အမြဲတန်းတပ်တွေက တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေ။National Guard ကြ တော့အမြဲတမ်းတပ်တွေလိုအချိန်ပြည့်တပ်တွေ မဟုတ်တော့ဖူး။ အရပ်သားတွေကိုအလုပ်အားတဲ့ စနေ၊တနင်္ဂနွေမှာ သင်တန်းပေးပြီးဖွဲ့ထားတာ။ အချိန်ပိုင်းတပ်မတော်လို့ပြောလို့ရတယ်။ စစ်မဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီတပ်တွေဟာပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (Governors) တွေအောက်မှာရှိတယ်။ သဘာဝဘေးဒဏ်ကျရောက်ရင်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတွေက ဒီတပ်တွေကိုထုတ်သုံးလို့ရတယ်။ စစ်ဖြစ်ရင်ဒီတပ်တွေကို ပင် တာဂွန်ကအလှည့်ကျ (အထိုင်)တပ်တွေအဖြစ် လွှပ်လို့ရတယ်။ ဖက်ဒရယ်ဥပဒေအရကုမ္ပဏီတွေက ဒီအချိန် ပိုင်းတပ်သားတွေကို အလုပ်ပြန်ပေးရတယ်။ဒီစစ်သားတွေရဲ့ သင်တန်းပေးမှုကို ပင်တာဂွန်ကကိုင်ပေမဲ့ သင်တန်းကုန်ကျစရိတ်ကို ဖက်ဒရယ်နဲ့ပြည်နယ်အစိုးရတွေက အချိုးကျစီမျှဝေခံရတယ်။
၉-၁၁ဖြစ်တော့ နယူးယောက်မှာအရေးပေါ်တက်လာတဲ့ စစ်လေယဉ်တွေဟာAir National Guards လေယဉ်တွေပေါ့။ ၀ါရှင်တန်အတွက်ကြတော့ ဗါဂျီးနှီးယားLangley လေတပ်စခန်းကတက်လာရတာ။
အမေရိကန်စစ်တိုင်းတွေအောက်မှာ စစ်တပ်မထားဖူး။ စစ်တိုင်းဆိုတာ မိမိတိုင်းပိုင်နယ်မြေမှာဖြစ်နိုင်ခြေ စစ်ပွဲတွေအတွက် အမြဲပြင်ဆင်ထားရတယ်။ အဟာမိတ်ဖွဲ့ထားရတယ်။ အမေရိကန်ရဲ့ စစ်ဗျူဟာကဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်အတွေ့အကြုံအရ တချိန်ထဲမှာစစ်ပွဲနှစ်ပွဲဆင်နွှဲနိုင်ရမယ် (Two wars doctrine) အတွက်ပြင်ဆင် တာပဲ။ အက်လန်တစ် နဲ့ပစိဖိတ်စစ်ပွဲဆိုပြီး သတ်မှတ်ခဲ့တယ်။ စစ်ဖြစ်မှ စစ်တိုင်းမှူးက စစ်ပွဲဦးစစ်စီးဖြစ် လာပြီး စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေကBattle Plan စစ်ပွဲပလင်ကိုတင်ပြရတယ်။ သမ္မတကကဘောတူရင်လိုအပ်တဲ့ တပ်တွေကို သမ္မတကပေးရတယ်။ပထမအီရတ်စစ်ပွဲမှာ အလယ်ပိုင်တိုင်းမှူးများဖြစ်ကြတဲ့ နော်မန်စွပ်က် ခေါ့ (NormanSchwarzkopf) နဲ့ တွန်မီဖရင့် (Tommy Frank) တို့ဟာစစ်ပွဲစစ်ဦးစီးတွေဖြစ်လာကြတယ်။သူတို့လိုတဲ့တပ်တွေကိုစစ်သေနာပတိချုပ်သမ္မတကပေးရတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနော်မန်ကကမ်းခြေတက်သိမ်းမဲ့ ပုံဟန်ပြပြီး Hail MaryPass လို့နံမည်ရတဲ့ မထင်တဲ့၊သဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီး လက်ဝဲဖက်က ပန်းတိုက်တာ ကြောင့်အီရတ်တွေစစ်ရှုံးပြီး အတုံးအရုံးသေကြတာကြောင့်အမေရိကန်သမ္မတတဖက်သတ်စစ်ကိုရပ်လိုက်ရတယ်။ဒီလိုအောင်မြင်မှုရအောင် အမေရိကန်သမ္မတက လိုသမျှကြည်းတပ်၊ရေတပ်၊လေတပ်နဲ့ မရိန်းတပ် သားတွေပေးပြီး၊ စစ်ပွဲပြီးတော့ကိုယ့်တပ်ကိုယ်ပြန်သွားကြတယ်။ ဒီလို၊စစ်ပွဲဖြစ်မှ စုလာပြီးတိုက်တာကို မေ တရစ် (matrix) စနစ်လို့ခေါ်ပါတယ်။
အမေရိကန်တွေက ကမ္ဘာကိုစိုးမိုးဖို့ ဦးတည်တာမို့ပြည်တွင်းအတွက် စစ်တိုင်းတွေမရှိခဲ့ဖူး။ အခုမှာHome Command ဆိုတာကိုဖွဲ့ရတယ်။ ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ ပစိဖိတ်စစ်တိုင်းကိုရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်ကပဲဦးစီးရတယ်။ အမှတ် (၇) ရေတပ်က ဂျပန်မှာရှိတယ်။ မကြာခင်ကမှ ရေတပ်ဗိုလ်ချုပ်က အလယ်ပိုင်းစစ်တိုင်းမှူးဖြစ်ပြီး မကြာဖူးပြုတ်သွားတယ်။
ဗမာစစ်တပ်မှာ (စ)ဖွဲ့စဉ် ကတည်းကကြည်းတပ်ကပဲ အုပ်စီးခဲ့တာမို့ ယနေ့အထိ ကြည်းတပ်ကပဲအုပ်စီး ထားဆဲပါပဲ။တခြားနိုင်ငံတွေနဲ့ စစ်ခင်းဖို့ကမ္ဘာ့အဆင့်အတန်းမှီတဲ့ Professional Army အဆင့်ကိုယနေ့ အထိမရောက်သေးပါဖူး။ မရောက်တဲ့အပြင် ယနေ့တပ်ဖွဲ့စည်းမှု အင်အားမပြည့်ပဲ စည်းကမ်းအလွန်ရော့ ရဲတယ်လို့နားလည်ပါတယ်။ ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ အကြောင်းအရင်းကစစ်အာဏါရှင်စနစ်ကြောင့်လို့ပြောလို့ရပါ တယ်။ စစ်တပ်ဆိုတာတိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးအတွက် ၊အထူးသဖြင့် ပြည်ပကျူးကျော်မှုကိုခံနိုင်ဖို့အတွက် ပြင်ဆင်ဖွဲ့စည်းပြီး အချိန်ပြည့်စစ်ရည်ဝအောင်လေ့ကျင့်ပေးနေရတာပါ။ အပိုတွေလုပ်နေရင် စစ်အတွက် မပြင်ဆင်နိုင်တော့ဖူး။
စစ်သားတွေက ဘ၀င်မြင့်ပြီး စစ်ရေးပါမကအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေး ၊နိုင်ငံရေးမှာပါဝင်အုပ် စီးလိုက်ကြတော့ စစ်အာဏါရှင်စနစ်ဆိုးအောက်မှာတိုင်းပြည်လည်းမွဲပြာကျ ၊စစ်တပ်လည်း အဆင့်ကျခဲ့ရတာပါ။ မြွေပါလည်းဆုံး ၊ သားလည်းဆုံးအဖြစ်ဆိုးနဲ့ကြုံရတာပါ။
တကယ်စဉ်းစားတတ်ရင် စစ်တပ်တစ်ခုအတွက် အရေးအကြီးဆုံးက (ငွေ)ပါပဲ။ငွေမရှိပဲ အရည်အချင်းမှီတဲ့ တပ်မတော်ကိုမထူထောင်နိုင်ပါဖူး။ (ငွေ)ရှိဖို့အတွက် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှုရှိရမယ်။ စစ်အေး တိုက်ပွဲမှာအမေရိကန်တွေ အနိုင်ရသွားတာ နောက်ဆုံးတော့ (စီးပွားရေး)ပဲ။ ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်တွေ ကစစ်တပ်ကြီးထူထောင်ပြပေမဲ့ ၊ဆိုရှယ်လစ်စီးပွားရေးကြောင့် တိုင်းပြည်မွဲမွဲလိုက်လာတဲ့အခါ ၊စစ်အသုံး စရိတ်ဟာ၊ နောက်ဆုံး(၀န်ပိုး) ကြီးဖြစ်လာတယ်။သမ္မတရီဂင်တက်လာတော့သင်္ဘော(၆၀၀)ရှိတဲ့ရေတပ် ကြီးထောင်၊Star Wars လို့ခေါ်တဲ့ (အာကာသစစ်ပွဲ)အတွက်ငွေတွေ စွပ်သုံးတော့ဆိုဗီယက်တွေလိုက်မမှီ ဟန်မဆောင်နိုင်တော့ပဲ ဆိုဗီယက်စနစ်ကြီးနောက်ဆုံးပြိုကျခဲ့ရတယ်။
တရုတ်တွေက ဆိုဗီယက်တွေရဲ့နမူနာကို မြင်ပြီးအရင်းရှင်စနစ်ကိုပြောင်း၊တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကိုနိုင်အောင် ကိုင်ပြီးမှတဖြည်းဖြည်း စစ်တပ်ကိုချဲ့လာတာ။ သင်္ခန်းစာယူစရာပါ။
ဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်း တိုက်ခိုက်ရေးတပ် နဲ့ အထိုင်တပ်တွေရှိပါတယ်။ ပြည်တွင်းစစ်ကိုတိုက်တော့ ခြေမြန်တပ်ရင်းတွေကိုဖွဲ့ကြရတယ်။ ၁၀၁ကနေ ၁၀၉ဆိုပြီး အထူးတပ်တွေဖွဲ့ခဲ့ကြတယ်။ ဗကပဗဟိုကို ခြေမှုန်းဖို့ဗိုလ်မှူးကြီးတင့်ဆွေကို တပ်မ(၇၇) ဖွဲ့ဖို့အမိန့်ပေးပြီး တပ်ရင်း(၁၂) ရင်းပေးတော့ခြေမြန်တပ် ရင်း(၁၀၁ - ၁၀၉)အထိအကုန်ထဲ့ပေးလိုက်တာပဲ။ ဗကပ ဗဟိုကိုဝင်စီးတဲ့ ၁၀၅ ဆိုရင်(105 - fight fight fight) ဆိုပြီးနံမည်ကြီးခဲ့ရတာပဲ။ တပ်မ(၇၇) ပြီးတော့(၈၈) ပြီးတော့(၉၉) ၊နောက်ဆုံး တပ်မ(၁၀) ခုအထိဖွဲ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒီခြေမြန်တပ်မတွေဟာယနေ့အထိ ဗမာ့တပ်မတော်ရဲ့ အခြေခံကျောရိုးလို့ပြော လို့ရပါတယ်။ ဒီခြေမြန်တပ်မတွေကို အမေရိကန်82nd Airborne Division ကိုပုံတူကူပြီးဖွဲ့ခဲ့တာပါ။
တပ်မ တွေမဖွဲ့စည်းမှီအချိန် ၊ပြည်တွင်းစစ်ကာလကစပြီး (တပ်မဟာ)(Brigade) ဆိုတာတွေကို ဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ တပ်မဟာ(၁၃) ခုအထိဖွဲ့ခဲ့ပါတယ်။ ဟိုတုန်းကတပ်မဟာကိုင်တဲ့သူကို (တပ်မင်း)လို့ခေါ်ကြပါ တယ်။တပ်မတွေဖွဲပြီးတော့ (တပ်မဟာ)တွေကိုတဖြည်းဖြည်း ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါတယ်။ ဗမာ့တပ်မတော်ဖွဲ့စည်းပုံ မှာတပ်မတွေကို စစ်ဆင်ရေးအတွက် စစ်ဌါနချုပ်ကထိုက်ရိုက်ကိုင်ပြီး(အထိုင်) တပ်တွေကိုတော့ စစ်တိုင်းတွေအောက်မှာထားပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးပြုရင်(တပ်မ) တွေက(တိုက်ခိုက်)ရေးတပ်အဖြစ်ထိုးစစ်ဝင်ရပြီး ၊စစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်ရာစစ်တိုင်းအောက်ရှိ နယ်မြေအခံတပ်တွေက(အကူ) တပ်အဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရ ပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် ဦးနေ၀င်းလက်ထက်ကတည်းက တပ်မတွေဟာအရေးပါလာခဲ့တယ်။ တပ်မမှူးကနေတိုင်းမှူး ၊ဒီကမှတဆင့် ၀န်ကြီးသို့မဟုတ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဖြစ်လာကြတာမို့ (တပ်မ)ကိုင်ရဖို့ အပြိုင်အဆိုင်ဖြစ်ခဲ့ ရပါတယ်။ ဗမာစစ်တပ်ဟာလည်း ကွန်မြူနစ် ဗကပ သူပုန်၊ တရုတ်ဖြူ၊ ပြည်တွင်းလက်နက်ကိုင်အုပ်စုပေါင်းများစွာ နဲ့ထောက်လျှောက်တိုက်လာရသည်မို့ တပ်ကိုင်တဲ့စစ်ဗိုလ်၊ရှေတန်းမှာစစ်တိုက်ဖူးတဲ့စစ်ဗိုလ်ကိုမှ အထင်ကြီး တဲ့အစဉ်အလာဖြစ်ခဲ့ရပြန်တယ်။ ၁၉၈၈ခုနှစ် အရေးတော်ပုံပြီးကတည်းက စစ်ကောင်စီ ကိုဦး ဆောင်ခဲ့ကြ တဲ့ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်က တပ်မ (၇၇)၊ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးသန်းရွှေက တပ်မ (၈၈) ဒုဗိုလ် ချုပ်မှူးကြီးမောင်အေး က တပ်မ(၇၇)၊ တပ်မမှူးတွေဘ၀က လာခဲ့ကြတာမဟုတ်ပါလား။တပ်မ(၇၇)က ပဲခူး ရိုးမမှာ သခင်သန်းထွန်းနဲ့ ကွန်မြူနစ်ဗဟိုကို အပြုတ်ခြေမှုန်းနိုင်ခဲ့သလို ၊ တပ်မ (၈၈) က သခင်ဗသိန်းတင် နဲ့ တရုတ်တွေရဲ့ အနောက်မြောက်ထိုးစစ်ကို အောင်မြင်အောင်တိုက်ပွဲဆင်နိုင်ခဲ့တာမို့ရာဇ၀င်အစဉ်အလာ ရှိခဲ့ရပါတယ်။
ခြေမြန်တပ်မတွေဟာတိုက်ခိုက်ရေးတပ်မ တွေဖြစ်တာကြောင့် စစ်ဆင်ရေးအတွက် စစ်ဌါနချုပ် ကပဲထိုက် ရိုက်ကွပ်ပဲရပါတယ်။
ဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာ Col GS (Colonel General Staff) (Army) စစ်ဦးစီဗိုလ်မှူးကြီး(ကကကြည်း) ဆို တာအလွန်အရေးပါ ၊ ပါတယ်။ ကြည်းတပ်ရဲ့ဦးစီးဖြစ်တဲ့(ဒု)ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရဲ့အမိန့်တွေဟာဒီစစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးကြီးကတဆင့်သွားရတာပါ။နောင်ဒီရာထူးကို Brigadier G.S. စစ်ဦးစီးဗိုလ်မှူးချုပ်အဖြစ်ရာထူးတိုး သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ၁၉၈၈ မတိုင်ခင်က ခြေမြန်တပ်တွေကိုCol G.S. (Army) က ထိုက်ရိုက်ကိုင်ပေမဲ့ ၁၉၉၀ ခုနှစ်ကစပြီး ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်(ကကကြည်း) ကထိုက်ရိုက်ကိုင်ပါတယ်။
ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်က(စ)ပြီး ဒီခြေမြန်တပ်မ တွေကိုတပြည်လုံး ဖြန့်ထားပါတယ်။ဥပမာ တပ်မ(၁၁) ရဲ့ ဌါနချုပ်ဟာ (အင်းတိုင်) မှာရှိပေမဲ့ သူ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဟာ အင်းတိုင်နဲ့ ရဲမွန်မှာရှိပါတယ်။ ထို့ နည်းတူစွာ တပ်မ(၃၃) ရဲ့ဌါနချုပ်ဟာ စစ်ကိုင်းမှာရှိပေမဲ့ သူ့လက်အောက်ခံတပ်တွေဟာ မန္တလေး၊ ရွှေဘို၊စစ်ကိုင်း၊၀န်းသို၊ ပုသိမ်ကြီး မှာ တပ်ဆွဲထားကြပါတယ်။ဒီတပ်တွေကို (ကကကြည်း) ကထိုက်ရိုက်ကိုင်တာမို့ အမှန်တကယ်က စစ်တိုင်းမှူးတွေနယ်မြေခံတပ်တွေနဲ့ အာဏါမသိမ်းနိုင်အောင် ထန်ပြန်ထိန်းထားတာလို့ ယူဆလို့ရပါတယ်။ စစ်ဆင်ရေးရှိမှတပ်မတပ်တွေကိုဆွဲထုတ်လာပြီ စစ်ကြောင်းတွေဖွဲ့စေတာပါ။တိုက်ခိုက် ရေးစစ်ကြောင်းနဲ့ ပိတ်ဆို့ရေးစစ်ကြောင်းတွေကိုတော့တပ်မတပ်တွေကပဲတာဝန်ယူလေ့ရှိပါတယ်။ဒီလို ၊ လိုအပ်မှ ဖွဲ့စည်းတဲ့စနစ်ကို matrix လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းလက်ထက်က ကွန်မင်ဒိုတပ်တွေ ကို တောင် တစုတဝေးထဲမထားဖူး။ ခွဲဖြန့်ထားပြီး တိုက်ပွဲရှိမှmatrix စနစ်နဲ့ စုပေါင်းတပ်ထွဲပြီးတိုက်တာပါ။ အဓိက၊ ကတော့ အထူးတပ်ရင်းကိုအသေထိုင်ထားရင် အာဏါသိမ်းတပ်ဖြစ်လာမှာစိုးရိမ်ရလို့ပါ။
ဗမာစစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတပ်မတွေဟာ တိုက်ခိုက်ရေးတပ်တွေဖြစ်တာကြောင့် အမေရိကန်တပ်မတော်က အမြဲတန်းတပ်တွေလို စစ်လက်နက်တပ်ဆင်ရာမှာရော၊ သင်တန်းရရှိမှုမှာရော အထိုင်တပ်တွေထက် သာ ပါတယ်။ စာရေးသူမှတ်မိသလောက် ၊ ၁၉၇၀ ခုနှစ်တွေကထင်တယ်၊ လေတပ်ကွန်မင်ဒို ဆိုတာ ပေါ်လိုက်သေးတယ်။ နံမည်ထွက်လာတာနဲ့ ချက်ချင်းဖျက်ပစ်လိုက်တယ်။ စစ်အာဏါရှင်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ကာကွယ်ရေးသာမက ၊ မိမိအါဏါကာကွယ်ရေးကိုလည်း ကြည့်တတ်စမြပဲ။
အမေရိကန်တပ်မတော်တောင်အစက ဆိုဗီယက် တပ်နီတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်တိုက်ဖို့ဖွဲ့စည်းထားရာက အခု အဲလ် ကိုင်းဒါးလို ၊တာလီဗန်လို နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတဲ့ AsymmetricalWarfare လို့ခေါ်တဲ့ (ဖက်မညီ) စစ်ပွဲမျိုးမှာ လူနဲ နဲ နဲ့ ထိထိ ရောက်ရောက်တိုက်ရတဲ့ အထူးတပ်(Special Forces) တွေကပိုအသုံးဝင်အသုံးချလာရတယ်။ သမ္မတဂျင်မီကာတာလက်ထက် အီရန်က အဖမ်းခံအမေရိကန်တွေကို ကယ်ဖို့အစီအစဉ် ပျက်ပြီးကတည်း က Special Forces Command ဆိုတာကိုဖွဲ့ခဲ့ရတယ်။ ထိုင်းမှာNavy Seals Program ရှိတယ်။ ဗမာတပ် မှာဒီလိုတပ်ဖွဲ့တွေ မရှိသေးဖူး။Navy Seals Program တက်ပြီးအောင်လာတဲ့ ရေတပ်စစ်ဗိုလ်တစ်ယောက် နှစ်ယောက်ရှိတယ်။သူတို့ကိုဦးစီးစေပြီး ဒီလိုပရိုဂန်မျိုးစီစဉ်သင့်ပေမဲ့ ၊ ဗမာ့တပ်မတော်မှာရေတပ်က ကြည်းတပ် လိုနေရာ မရ တော့ ဒီလူတွေကို တိုင်းပြည်အတွက် အသုံးမချနိုင်ဖြစ်ခဲ့ရတယ်။
စစ်ဆင်ရေးအထူးတပ်ဖွဲ့မှူး (ကစထ)Bureau of Special Operarions (BSO)
၁၉၇၈ ခုနှစ်အစပိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ ဗကပ ကွန်မြူနစ် တွေရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုကို နားထောင်ဖို့ လားရှိုးကိုသွားရောက်ခဲ့တယ်။ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီက ထိုအချိန်က ဗကပတွေရဲ့ အကြောင်းကိုအသိဆုံး စစ် ဗိုလ်ချုပ်လုိ့ပြောလို့ရပါတယ်။အကြောင်းက တပ်မမှူးအဖြစ် (၄)နှစ်၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း ဗျူဟာမှူး နဲ့ အရှေ့ ပိုင်းတိုင်းမှူးအဖြစ်(၃) နှစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးတယ်။ ဗကပတွေရဲ့ အရှေ့မြောက်ဒေသလှုပ်ရှားမှု တွေ ဟာ မြောက်ပိုင်းတိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း နဲ့ အရှေ့မြောက် စစ်တိုင်းတွေမှာလှုပ်ရှားကြတာမို့ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီ ဟာ ဗကပတွေအကြောင်းအသိဆုံးမို့ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းကိုသူကပဲရှင်းပြပေးခဲ့ရတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းဟာ ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီရဲ့ ရှင်းလင်းတင်ပြချက်တွေကိုသဘောတွေ့ပြီးတပြိုင်ထဲမှာ စစ်တိုင်းတွေ အချင်းချင်းညှိနှိုင်း ဖို့လိုတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားတယ်။ဒါကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်နေ၀င်းက(ဗျူရို) ဖွဲ့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
ပထမတော့ (ဗျူရို) ဆိုတာ စစ်တိုင်းတွေညှိနှိုင်းမှုလိုအပ်တဲ့ (အထူးစစ်ဆင်ရေး) တွေအတွက်ပဲ။နောက် ပိုင်းမှာတော့ မြောက်ပိုင်းတိုင်း၊ အရှေ့ပိုင်းတိုင်း၊ အရှေ့မြောက်တိုင်း၊အနောက်မြောက်၊တိုင်း (၄) တိုင်း အ တွက် BSO(1) နဲ့ အရှေ့တောင်တိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း၊ အနောက်တောင်တိုင်း နဲ့အလယ်ပိုင်းတိုင်းကို ဦးစီးရတဲ့ BSO(2) ကိုဖွဲ့စည်းပြီး အုပ်ချုပ်မှုအာဏါကိုခွဲပေးခဲ့တယ်။၂၀၀၂ ကစပြီးစစ်ဆင်ရေးအထူးအဖွဲ့မှူး (ကစထ) တွေကို စစ်တိုင်းတွေအပေါ် စစ်ရေးအပြင်၊အုပ်ချုပ်ရေး။ စီးပွားရေးတွေကိုပါကြီကြပ်စေခဲ့ပါတယ်။ဒေါက်တာမောင်အောင်မျိုးကတော့ တည်ဆောက်ရေးပရောဂျက်တွေကို ၀န်ကြီးဌါနတွေနဲ့ပါညှိရတဲ့ဒုဝန် ကြီးချုပ်ရာထူးနဲ့ပုံသဏ္ဍန်တူတယ်လို့ရေးတယ်။ (Building Tatmadaw စာမျက်နှာ (၇၄))။ စာရေးသူ က တော့Supra Military Command ထွင်ပြီး စစ်တိုင်းမှူးတွေကို ပညာသားပါပါကိုင်လိုက်တာပဲလို့ယူဆတယ်။ ၁၉၈၈ အာဏါ သိမ်းစဉ်ကပါလာတဲ့ စစ်တိုင်းမှူးတွေ လို အာဏါသိပ်ထက်လာရင် တိုင်းမှူးတွေပေါင်းမိပြီး အာဏါ သိမ်းချင်စိတ်တွေဝင်လာနိုင်တယ် မဟုတ်ပါလား။ နောက်ဆုံး (ကစထ) (၆) ခုအထိတိုး ချဲ့လာခဲ့တယ်။တိုင်းမှူးတွေအစား(ကစထ) မှူးတွေက(နအဖ)အဖွဲ့ဝင်တွေဖြစ်လာပြီးရာထူးအရ(ဒု) ဗိုလ်ချုပ် ကြီး အဆင့်ဖြစ်လာရတယ်။
စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌါနချုပ် (MOC) နှင့်ဒေသကွပ်ကဲမှုစစ်ဌါနချုပ် (ROC)
တပ်မတစ်ခုမှာ ဗျူဟာ (၃)ခုရှိတယ်။ ဒါကြောင့်ဗမစစ်တပ်မှာ ရာထူးတက်ဖို့လမ်းကြောင်းက ဗျူဟာမှူး (ဗိုလ်မှူးကြီး)၊ တပ်မမှူး (ဗိုလ်မှူးချုပ်)၊ စစ်တိုင်းမှူး (ဗိုလ်ချုပ်)၊ကစတမှူး (ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီး)၊ ဒီလိုကနေ တက်ရတာကိုး။ ၈၈ အပြီးမှာ ဖွဲ့ဖြစ်တာက တပ်မ(၁၁)။ ဒီဇင် ဘာလ ၁၉၈၈ မှာဖွဲ့တာပါ။ နောက်နှစ်မှာတပ်မ ၁၀၁ ကို ပခုက္ကူမှာဖွဲ့ပါတယ်။ န၀တခေတ်မှာ ဖွဲ့တဲ့ တပ်မအသစ် (၂)ခုပါ။ ၁၉၈၉ ခုနှစ်မှာတပ်မ (၁၀)ခုဖြစ်သွားပြီ။ ၁၉၉၂ ခုနှစ်မှာအမိန့်ပေးအုပ်ချုပ်နိုင်မှု(Command and Control) လိုအပ်မှုအတွက် ဒေသ ကွပ်ကဲမှု (RegionalOperation Commands)(ROC) နှစ်ခုကို မြိတ်နဲ့လွိုင်ကော်တို့မှာဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လမှာ စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌါနချုပ်(MOC) (၂၁)ခုကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။ (MOC) နံပတ် (၄) ကမှ လေထီးကုန်တပ်အဖြစ်သတ်မှတ်ထားတယ်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်ဟာ (MOC) ကလာတာပါ။
ဗမာစစ်တပ်ရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကသာမန်စစ်တပ်နဲ့ မတူတာတွေရှိတယ်။ မျက်စိလည်စရာကောင်းတာတွေရှိတယ်။ ဥပမာ အမေရိကန်စစ်တပ်ဖွဲ့စည်းပုံမှာတပ်ရင်း (Battalions) ၊ တပ်မဟာ (Brigade) ၊ ပြီးရင် တပ်မ(Divisions) ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ တပ်မတစ်ခုမှာ တပ်မဟာ (၃) ခုပါ၊ ပါတယ်။ တပ်မကို ဗိုလ်ချုပ်ကဦးစီးတယ်၊ တပ်မဟာ(Brigade) ကို (Brigadier) ကဦးစီးရပါတယ်။ တပ်ရင်း(battalions) တွေကို ဗိုလ်မှူးကြီးက ဦးစီးရပါတယ်။ သူတို့ဖွဲ့စည်းပုံကရှင်းတယ်။
ဗမာတပ်မှကျတော့စစ်ဆင်ရေးကွပ်ကဲမှုဌါနချုပ်(MOC) ဆိုတာက အမှန်တော့ (တပ်မ)ပါပဲ။ သူ့အောက်မှာ တပ်ရင်း (၁၀)ရင်းပါတယ်။ တပ်မအောက်မှာ ဗျူဟာ (၃)ခုရှိပါတယ်။ သူ့ကိုကျတော့ (ဗျူဟာ) (TacticalOperations Command) (TOC) လို့ခေါ်ပါတယ်။ (MOC) ကျတော့ စစ်တိုင်းတွေအောက်မှာရှိပြန်တယ်။ တခါ နယ် မြေထိန်းသိမ်းရေးအတွက်(ROC) ဆိုတာရှိပြန်တယ်။ သူ့အောက်မှာ တပ်ရင် (၄)ရင်းရှိပြီး ဗိုလ် မှူးချုပ်ကပဲ အုပ်ချုပ်ရပြန်တယ်။ သူလည်းပဲစစ်တိုင်းမှူးအောက်မှာပဲရှိပြန်တယ်။ဒေါက်တာမောင်အောင်မျိုးရဲ့အဆိုအရ ၂၀၀၈ မှာဗမာစစ်တပ်မှာ ခြေမြန်တပ်မ (LID) (၁၀) ခု၊ (MOC) တပ်မ (၂၁) ခု နဲ့ (ROC) (၆)ခုအထိရှိပြီလို့ ဆိုပါတယ်။ (Building The tatmadaw စာမျက်နှာ(၈၀))(မှတ်ချက်။ ဒီနေရာမှ NDDကထုတ်တဲ့ စစ်အင်္ဂါ စဉ် ဆိုတဲ့စာဆောင်ကလည်း အလွန်အထောက်အကူပြုပါတယ်)
ဗမာစစ်တပ်မှာ (G) (General Staff)(စစ်ဆင်ရေး) ၊ (A) (Adjudant) (စစ်ရေး) ၊(Q) (Quarter Master) (စစ်ထောက်) ဆိုပြီး တပ်ရင်းတိုင်းမှာရှိကြသလို၊ စစ်ရေးချုပ်၊ စစ်ထောက်ချုပ် အထိရှိကြပါတယ်။ ဗမာ စစ်တပ်မှာ (G) လိုင်းကသာလျှင် တပ်ရင်း၊တပ်မ၊ စစ်တိုင်းကိုင်ရတဲ့ စစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဖြစ်လာပါတယ်။(A) နဲ့ (O) ဖက်ရောက်ရင် ဒုတိယအတန်းအစား စစ်ဗိုလ်တွေဖြစ်သွားတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ယခင်က သင်တန်း ဦးစီးရတဲ့ စစ်ဗိုလ်တွေလည်း ချောင်ရောက်တယ်ပြောလို့ရပေမဲ့ ယ္ခုတော့ သင်တန်းဗိုလ်ချုပ်တွေလည်းတိုင်းမှူးဖြစ်လာကြတာရှိလာပါပြီ။
ဒုတိယကမ္ဘာစစ်က ရန်သူ့လေယဉ် (၅)ဆင်းကိုပစ်ချနိုင်မှ(ACE) လို့သတ်မှတ်ပါတယ်။ ဂျာမန်တွေက အ တော်ဆုံး (ACE) ကိုရှေ့တန်းမှာပဲ ထားတော့ကြာတော့ သူရဲကောင်းတွေ၊ လူတော်တွေ လျော့လျော့သွား တယ်။ အမေရိကန်က အတော်ဆုံးလူတွေကို စစ်ကျောင်းတွေကို ပြန်ခေါ်သွားပြီးလူသစ်တွေကို မွေးထုတ် ခိုင်းတော့ လူတော်တွေ ဆက်ကာဆက်ကာမွေးထုတ်နိုင်တယ်။ ဒုတိယအီရပ်စစ်ပွဲမှာ တဟုန်ထိုးနံမည် ကျော်လာတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ပက်တရီးရပ်(Petraeus) ဟာ သူအီရတ်မှာရလာတဲ့အတွေ့အကြုံတွေကို အမေရိ ကန်စစ်ဗိုလ်တွေအတွက် (သူုပုန်နှိမ်နှင်းရေးလက်စွဲ)စာအုပ်ဦးစီးထုတ်ဝေခဲ့တယ်။ အမေရိကန်စစ်ဗိုလ်တွေ ဟာ အမေရိကန်စစ်တပ်မှာ စစ်တိုက်တာကလွဲလို့တာဝန်မရှိဖူး။ ဒါပေမဲ့ အီရတ်လိုနေရာမှာကြတော့ (တိုင်း ပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေး) ဟာအရေးပါလာတယ်။ဒါကြောင့်သူ့ရဲ့ (ငွေဟာလက်နက်) (Money is Ammunition) ဆိုတဲ့ဆောင်ပုဒ်ဟာ နံမည်ကျော်ခဲ့ရတယ်။ဗိုလ်ချုပ်ပက်တရီးရပ်ဟာ ၀က်စ်ပွိုင့် (West Point) စစ်တက္ကသိုလ်ကအောင်စဉ်က ထိပ်ဆုံးကအောင်ပြီးနံမည်ကျော် ပရစ်စတင် (Princeton) က ပါရဂူ ဘွဲ့ရထားသူဖြစ်တယ်။ အမေရိကန်တွေ စနစ်ကျတာကရှေ့တန်းမှာတိုက်ပြီးရလာတဲ့သင်္ခန်းစာတွေကို Institutional Knowledge လို့ခေါ်တဲ့ စစ်တပ်တခုလုံးအကျိုးရှိအောင် ပြန်လည်ဖြန့်ဝေပေးတယ်။
အမေရိကန်စစ်တပ်ရဲ့ အားသာချက်က(စစ်တိုက်)တတ်အောင်သာသင်သည်မဟုတ် (တွေးတတ်)အောင် သင်ပေးတယ်။ စစ်ပွဲမှာလည်း အသေမကိုင်ထားဖူး။စစ်ပွဲအခြေအနေအရ ပြောင်လဲခွင့်ပြုတယ်။ အာဏါရှင် တွေရဲ့ စစ်တပ်တွေမှာ အမိန့်အတိုင်းပဲ။ရှေ့တန်းစစ်မျက်နှာက စစ်ဗိုလ်တွေကို (တွေးခေါ်ခွင့်) မပြုဖူး။ ၁၉၇၄ ခု အာရပ်အဇ္ဇရေးစစ်ပွဲမှာအဇ္ဇရေးတွေအလစ်အထိုးခံလိုက်ရတယ်။ ဆီးရီးယားတင့်ကားတွေက အခွင့်သာ တုန်းရှေ့ဆက်ချီတက်သင့်တယ်။ မရဖူးရှေ့တန်းအခြေအနေကို မသိတဲ့ နောက်တန်းဗိုလ်ချုပ်က ပလင် အ တိုင်းရပ်ပြီးညအိပ်နေတယ်။ သူတို့တွက်ထားတာကအဇ္ဇရေးreserve တပ်သားတွေစုဖို့ (၂၄) နာရီကြာမယ် လို့တွက်ထားတယ်။ အဇ္ဇရေးတွေက (၅)နာရီနဲ့ (စု)ပြီးညတွင်းချင်းချီတက်လာကြတာ နံက်မိုးလင်းလို့ရှေ့ကို ချီတက်တော့ ရှေ့မှာ အဇ္ဇရေးတင့်ကားတွေကစောင့်နေပြီ။ အာရပ်တွေ တိုက်လိုက်တိုင်းရှုံးကြတာလည်း မ ဆန်းလှပါဖူး။အာရပ်တပ်တွေက အာဏါရှင်ရဲ့တပ်တွေကိုး။
ဗမာစစ်တပ်မှာလည်း ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းရီလိုဗကပတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်တစ်ယောက်ဟာ ဗကပ တွေ ရဲ့ တွေးနည်း၊တိုက်နည်း၊အားသာချက်၊အားနဲချက်တွေကိုဗိုလ်ချုပ်ပက်တရီးရပ်လို စစ်စာတန်းပြုစုနိုင်ခဲ့ရင် တန်ဖိုးရှိမှာပေါ့။ ဗမာစစ်တပ်ကအားလုံးကိုကို (လျှိ့ဝှက်) ထားတော့ ရှိရင်လည်း (လူ) တွေ (မသိ) ရဖူးပေါ့။